China Kwụ Ọtọ waya ịbịaru Machine factory na-emepụta | AKWWKWỌ
Njirimara nke igwe waya kwụ ọtọ bụ waya nchara gbanyere gburugburu ngọngọ nke otu ịdị elu wee banye na eserese na-esote ịnwụ, kechie na ngọngọ na-esote. Enweghị pole, ndu ma ọ bụ erughị ala ala n'etiti, nchara waya na-agba ọsọ maka a ogologo akara nke nkanka, nke na-ebelata waya ekwe na usoro nke waya ịbịaru. E wezụga, a ga-azụ erughị ala na ịbịaru nke bụ ike belata ịbịaru ike, belata eyi nke ịbịaru na ogologo ojiji ndụ nke na-anwụ, belata ike oriri na ndị ọzọ uru.
Wmpaghara eriri eriri
Rubber etiti ihe ebe
Gbado ọkụ waya ebe
Nga-nrụgide ígwè waya uzo
Alloy waya ebe
Ọ na-emetụta ịdọpụta wires nke nchara mmiri, waya bead, wires nchara maka eriri, waya nchara nchara, CO2 ọta ịgbado ọkụ wires, igwe eletriki a na-agbanye ọkụ maka ịgbado ọkụ, wires igwe anaghị agba nchara, na wiwi aluminom. na na.
Nnennen waya ịbịaru igwe bụ elu-ọsọ waya ịbịaru igwe. Ya isi atụmatụ bụ na drum adopts warara oghere ụdị mmiri oyi, nke nwere mma jụụ mmetụta; ọ adopts mbụ na klas ike warara V-belt na mbụ na klas ụgbọelu abụọ enveloping irighiri gia ụzọ maka elu nnyefe arụmọrụ na ala mkpọtụ; usoro nchebe zuru oke nwere ezigbo nchekwa; a na-anabata ikuku ikuku ikuku iji hụ na ị na-ese ihe.
Nnennen Waya ịbịaru MachineNka na ụzụ
Nlereanya (ngọngọ dayameta) mm
Ike nke waya ntinye / MPa
Max. dayameta nke eriri mmiri (mm)
Nkeji dayameta nke tinyekwa waya (mm)
Max ọsọ ọsọ (m / s)
Eserese ike (kw)
Nnyefe eriri ọkwa abụọ; okpukpu abụọ na-ekpuchi ikpuru ikpuru; gearbox na ike ezé elu
Wayzọ nke agba ukpụhọde
AC Frequency akakabarede ọsọ ukpụhọde ma ọ bụ DC ọsọ ukpụhọde
Usoro nlekọta ụgbọ ala Profibus, na-emetụ ihe ngosi ihuenyo,
nkwurịta okwu mmadụ na kọmputa, ọrụ nyocha ogologo oge
Spooler pay-off, nnukwu ego ịkwụ ụgwọ, ”-” ụdị akwụ ụgwọ,
ọbọgwụ-nip akwụ-apụ na-enweghị nkwụsị ọrụ
Ofzọ nke na-elu-elu
Spooler na--upstroke na-ahụ, headstand take-elu, na ihe nile nwere ike na-elu-waya enweghị nkwụsị ọrụ
Ndabere na-akwụsị na ofu ogologo na-akpaghị aka, waya gbajiri ule na-akwụsị ọrụ na-akpaghị aka,
- ebipu ngọngọ ọ bụla iji hazie usoro ọrụ ọhụụ ọhụụ,
mbelata iji kwụsị na-akpaghị aka mgbe ọta nchebe na-emeghe,
na-egosi ụdị ihe ọjọọ niile na ihe ngwọta,
nyocha na njikwa nke ụdị ozi agba niile
Ihe nwere ike ịdọrọ
Steel waya (elu, n'etiti, ala carbon ígwè waya, igwe anaghị agba nchara waya,
pre-erughị ala ígwè waya, bead waya, roba tube waya,
mmiri waya waya, koodu waya na na),
ịgbado ọkụ waya (ikuku echebe ịgbado ọkụ waya, submerged aak ịgbado ọkụ waya, agbanwe agbanwe cored waya na na)
waya eletriki na eriri (waya nchara aluminom, eriri ọla kọpa, waya aluminom na na)
alloy waya na ụdị igwe ndị ọzọ
Ihe edeturu: enwere ike gbanwee uzo niile dika onodu
Nke gara aga: Nche Rail Roll akpụ Machine
Osote: Electrode Mkpanaka Production Line